A ga-emegharị kọfị kọfị na igbe ụfọdụ | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
N'etiti ọha mmadụ nke oge a, anyị na-emepụta mkpofu na-enweghị ngwụcha na njedebe nke ụbọchị. Ọ bụghị naanị na ọtụtụ, mana n'ọtụtụ. Ebe ọ bụ na anyị na-emefusị ihe ma na-emegharịkarị, dị ka plastik, nkwakọ ngwaahịa, akwụkwọ na kaadiboodu, iko na ihe ndị dị ndụ, anyị anaghị aghọta na e nwere ọtụtụ ụdị unyi ndị ọzọ yana na a ga-eji ha mee ihe.
N'okwu a, anyị ga-ekwu maka ya kọfị ihe fọdụrụ. N'adịghị ka ihe mmadụ nwere ike iche, a gaghị awụpụ capsules kọfị n'ime akpa odo, mana enwere usoro ndị ụlọ ọrụ mepụtara iji kpokọta ma lekọta ụdị mkpofu a. Chọrọ ịma ihe emere na kọfị kọfị?
1 Mfe kọfị
2 Ihe eji emegharia
A naghị ele capsules kọfị anya dị ka nkwakọ ngwaahịa Nkwakọ ngwaahịa na Iwu mkpofu. Nke a bụ n'ihi na anaghị ekewa capsule site na ngwaahịa ha nwere. Maka nke a, ọ naghị abanye na ngwugwu nkwakọ ngwaahịa dịka karama, ite ma ọ bụ brik ndị a na-etinye n'ime akpa odo, mana a ga-eme ya n'ụzọ ndị ọzọ.
Iji na-emeso ihe mkpofu a, ụlọ ọrụ ndị dị ka Nespresso na Dolce Gusto emejuputala mmemme iji mesoo ihe mkpofu a ma weghachite ya. Ejirila ihe dị ọcha iji weghachite capsules kọfị kemgbe February 2011 na Barcelona. N’ebe niile na Spain, a na-ekesa gburugburu Ihe nchịkọta 150 maka Dolce Gusto na 770 maka Nespresso. Companieslọ ọrụ ndị ahụ na-ekwu na ha nwere ike imegharị 75% nke capsules ha na-ere, mana ha anaghị akwado ogo nke ndị ahịa na-alaghachi na arịa ndị ahụ.
Nke a bụ ezigbo echiche, mana enweghị mmata na capsules nwere ebe a na-emegharị ihe dị ka ihe niile. Mgbe omumu ihe nke ndi ahia nke Spain (OCU) mere, amatara na naanị 18% nke ndị ahịa zụrụ capsules ndị a na-emegharị ha na ha kwekọrọ ekwekọ. Otú ọ dị, 73% kwenyere na ha tufuru ha.
Lọ ọrụ dị iche iche ihe plastik ma ọ bụ aluminom, n'otu n'otu, si kọfị. A na-emegharị ndị nke mbụ na osisi ndị ọkachamara na ihe ndị a. Dịka ọmụmaatụ, a na-eji plastik mee ihe maka imepụta arịa ụlọ ndị mepere emepe dịka oche ma ọ bụ nkata. A na-emegharị kọfị dị ka compost maka osisi.
Ya mere, odi nkpa igbasa ihe omuma a karia otutu mmadu ka ejiri mee ihe ndia.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Gburugburu » Nzughari » A ga-emegharị kọfị kọfị na igbe ụfọdụ
Ndị European Commission na-ewepụta atụmatụ ọhụrụ iji belata anwuru
Anyanwụ griin haus nwere ike ịmịpụta ume na ịkụ azụ